काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागूः के-के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ? - Nepal Suchana
काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागूः के-के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ?
काठमाडौँ । कोभिड­-१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा केही खुकुलो पार्दै १० दिनका लागि थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू भएको छ ।
उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बुधबारको बैठकले केही खुकुलो पार्दै जारी निषेधाज्ञा यही जेठ २१ गते बिहान १ बजेदेखि ३१ गते राति १२ बजेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यस निषेधाज्ञाको आदेशमा किराना तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । यसअघि पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । उपत्यकामा गत वैशाख १६ गतेदेखि आदेश जारी गरी अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइँदै आइएको छ । यसपालि भने तरकारीलगायत किराना पसल, खाद्यान्न, तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर्स (ग्रोसरी मात्र) बिहान ९ बजेसम्मका लागि खुला गरिएको छ । अनलाइनबाहेकका शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका कार्यालयका सेवा स्थगन गरिएको छ । अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन तथा निर्माणका लागि आवासीय रुपमा श्रमिकलाई राखी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी काम गर्न सकिने छ । यसअघि उक्त कार्यमा समेत रोक लगाइएको थियो ।
विरामी वा कुरुवाको हकमा भर्ना कार्ड वा रिपोर्टको आधारमा दुई जना उपत्यकाभित्र जान पाइने तर अन्यत्र बिरामी भई जानुपर्ने भएमा भर्ना कार्ड वा रिपोर्ट कार्ड, परिचयपत्र खुल्ने कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । सुरक्षा गार्डले पोशाक र परिचयपत्रको आधारमा कार्यस्थलमा आवतजावत गर्न पाउने छन् । सूचना विभागको पास भएका पत्रकार बाहेकको हकमा आवातजावतका लागि प्रशासन कार्यालयबाट पास बनाउनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । फुटपाथ, खुला ठाउँका व्यवसाय र कवाडी सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । आदेश पालना नगरेमा कोभिड­१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ बमोजिम कारवाही हुने जनाइएको छ ।